भारतसँग किन खुसी भए प्रचण्ड ? एयरपोर्टमा जे देखियो (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भारतसँग किन खुसी भए प्रचण्ड ? एयरपोर्टमा जे देखियो (भिडियो)
डिसी नेपाल , २४ भाद्र २०७५
काठमाडौं। भारत भ्रमणबाट आइतबार फर्केका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रशन्न देखिए । उनले भारततर्फबाट पाएको स्वागत र सत्कारमा कुनै कमी महसुस नगरेको पत्रकारमाझ सुनाए ।
भारतको चार दिने भ्रमण पूरा गरी प्रचण्ड फर्केका हुन् ।
अध्यक्ष दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गरी आइतबार स्वदेश फर्किएका हुन्। भारतसँग विगतमा गरिएको सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन आफूले गरेको भ्रमण सफल रहेको प्रचण्डको ब्रिफिङ थियो ।
प्रचण्डले भारतमा प्रधानमन्त्री मोदी, विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलगायत उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा भारतीय नेताहरुले नेपालको समृद्धि र विकास चाहेको र बलियो सरकार बनेकोमा खुसी व्यक्त गरेको प्रचण्डले सुनाए ।
मन्त्रिमण्डल हेरफेरको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने अनुसार नै हुने प्रचण्डको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मन्त्रीमण्डल हेरफेर नगर्ने’ भनि दिएको अभिव्यक्तिबारे संचारकर्मीहरुले जिज्ञासा राखेपछि उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ अनुसार नै मन्त्रिमण्डल हेरफेरको विषय अघि बढने प्रतिक्रिया दिए।
वृद्ध भत्ता नबढाएकोमा जनगुनासो बढदै गएपछि आफूले त्यसलाई व्यवस्था गर्न पूरक बजेट ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
मुख्यतः भारतमा पाएको स्वागत सत्कारबाट प्रचण्ड खुसी देखिए र त्यो उनको अभिव्यक्तिमा प्रष्ट झल्किन्थ्यो ।
भ्रमणबारे प्रचण्डकै मुखबाट यो ब्रिफिङ सुन्नुस्ः